တစ်ခုခုတော့လုပ်ကြပါဦး…. :( | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » တစ်ခုခုတော့လုပ်ကြပါဦး…. :(
Posted by lone on Dec 19, 2011 in Travel | 33 comments
ဘတ်(စ်) ကိစ္စအတွက်နဲ့ lone ဒေါသထပ်ထွက်စရာလေးတစ်ခု ပြောချင်လို့ပါ…ပါရမီက လူကြီးတွေ ဘာလုပ်နေကြပါသလဲ……. နဲနဲ စည်းကမ်းတင်းကျပ်ကြပါဦး…..
lone အဘွားအိမ်ကိုသွားပြီးအပြန်…ပါရီမီအထူးကားနဲ့ပြန်လာပါတယ်…အထူးကားနော်… ရိုးရိုးကားဆိုပြောမနေနဲ့တော့…အထူးကားတွေက အရင်ကဆို ..TV နဲ့သီချင်းလေးဖွင့်နဲ့…စီးရသေးတယ်..အခုတော့….. :(….
ကားကိုလည်းမောင်းလိုက်တာမှ ဒုံးပျံအလား အောက်မေ့တယ်… မှတ်တိုင်ရောက်ပြန်တော့လည်း…တရေးအိပ်ရလောက်အောင် ရပ်စောင့်တယ်… ကားမှတ်တိုင်တစ်ခုအရောက်မှာ…အဘွားတစ်ယောက်က ကျောက်မြောင်း၊သီတာ ရောက်လားဆိုပြီး တုန်တုန် တုန်တုန် နဲ့ မှတ်တိုင်ကနေလှမ်းမေးတယ်…. အဲဒါကို စပါယ်ယာက … ဘာတွေလာမေးနေမှန်းကိုမသိဘူး..မောင်းမောင်း ဆိုပြီး ..အကြင်နာတရားမရှိ…ေ-ာက်မြင်ကတ်စရာ အခွက်နဲ့…ပြန်ပြောပါတယ်… lone လေ..အဲဒီ့စပါယ်ယာကိုအဲ့ဒီ့လိုပြောအုန်းဟယ်..ဆိုပြီး နရင်း သာပြေးအုပ်လိုက်ချင်တယ်…နောက်ပြီး ဆင်းမယ့်မှတ်တိုင် ရောက်တော့လည်း အစ်မတစ်ယောက်က ကလေးနဲ့ ဆင်းရတာကို…အဲ့ဒီ့စပါယ်ယာ အစုတ်ပလုတ်က..ကြိုထွက်မထားဘူး…အဲ့လောက်တောင်ထိုင်ချင်နေလား….. ထိုင်ခုံနဲ့ဖင်နဲ့ကပ်ပေးလိုက်ရမလားဆိုပြီးပြောသေးတယ်…အမလေးလေးနော်…lone လေဒေါသထွက်လိုက်တာအရမ်းပဲ….သူ့နှမသွားပြောပါလား…။…နောက် lone ဆင်းမယ့်မှတ်တိုင်ရောက်တော့…lone ကို ညီမလေး ဆင်းမှာလား…အောက်တဆင့်ဆင်းရပ်ပေးနော်…ဆိုပြီး lone လက်ကိုအတင်းလာဆွဲတယ်…lone က လက်ကို စောင့်ဖယ်လိုက်တော့မှ…ရုပ်က အီးမှန်တဲ့မျက်နှာနဲ့..မှတ်တိုင်လည်းရောက်ကော lone ကိုအတင်းစောင့်ဆွဲပြီးကားပေါ်တွန်းချတယ်…lone ခြေထောက်လိမ်ပြီး အောက်ကိုရောက်သွားတယ်…ကံကောင်းလို့ခြေချော်လဲမကျတယ်…လက်ကိုစောင့်ဆွဲလိုက်တော့ လက်မောင်းလည်း နဲနဲ မြက်သွားတယ်…တော်တော်ဆိုးတဲ့ စပါယ်ယာ lone ကားနံပါတ် ကိုအတင်းလိုက်မှတ်ပြီး တိုင်မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်…ဒါပေမယ့် သူတို့ကားတစ်စီးတည်း ကိုတိုင်လို့ပဲမဖြစ်ဘူး…ပါရမီ တစ်လိုင်းလုံး စည်းကမ်းရှိမှ…ဖြစ်မယ်..တစ်လိုင်းလုံးအချိုးပြင်မှပဲ ရမှာ…တကယ်ကိုစိတ်ကုန်နေပါပြီး…စပါယ်ယာ အစုတ်ပလုတ်တို့ရယ်…..ဘာမှမပြောကြတော့ဘူးလား…ဘာမှမလုပ်ကြတော့ဘူးလား…..စိတ်ပျက်တယ်….သတ်မှတ်ချိန်နဲ့ သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာလိုတာထက်ပိုမရပ်ပဲ…အချိန်မှန်မှန်မောင်းစေချင်ပါတယ်….စပါယ်ယာ ထားတဲ့စနစ်လည်းမလုပ်ကြပါနဲ့တော့…lone ကအဲဒီ့စပါယ်ယာတွေနဲ့ ဖက်ဖက်ပြီး…စကားမပြောချင်လို့…တစ်ခုခုတော့လုပ်ပါဦးပါရမီရယ်…ကျေနပ်မှုမရှိပါက တိုင်တန်းရန်ဆိုပြီးရေးထားပေမယ့်…တိုင်စရာမလိုအောင်….စည်းကမ်းရှိပေးကြပါတော့လား….စိတ်ပျက်လှပါပြီ…စိတ်တကယ်ပျက်လှပါပြီ…
သဂျီးက မှာထားတယ် တိုင်စာ ပစ်စာမတင်ရပါတဲ့
မှတ်ပုံတင် နာမည်ရေးပြီး သက်ဆိုင်ရာကို သေချာတိုင်ပါလို့ စီနီယာကြီးများ အဆိုအမိန့်
ပထမနည်းက သက်ဆိုင်ရာမထသဌာနခွဲကိုကိုယ်တိုင်ဖုံးဆက်ပြီး – အဖြစ်အပျက်ကို ထင်ရှားပေါ်လွင်အောင် (လိုအပ်ရင်နဲနဲချဲ့ကားပြီး) အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့အတွင်းမှာပဲ တိုင်ပါ။ တိုင်သူအမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် နဲ့ ဖုံးနံပါတ် (ကိုယ့်ဖုံးမပေးချင်ရင် လမ်းထိပ်ကတဆင့်ခေါ်ဖုံးလဲရတယ်) ပြောပြီး တိုင်ပါ။ ဘယ်သူသက်သေပါတယ်လို့ပြောပြီး (မရှိရင်လုပ်ထည့်) သက်သေရဲ့အမည်နဲ့ ဖုံးနံပါတ်ပါပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီကောင်ကားပေါ်ကဆင်းရပါပြီ။ အမှု့ကို ယုတ္တိရှိရှိနဲ့ နဲနဲချဲ့ကားဘို့မမေ့ပါနဲ့။ သူတို့ဆီရောက်ရင် ပြန်ချုံ့ပစ်မှာမို့ ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျတယ်။
ဒုတိယနည်းက မိမိနဲ့ ခင်မင်တဲ့ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ (စစ်ဗိုလ်ဖြစ်လျှင်ပိုကောင်းတယ်) ကို အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြီး တိုင်ခိုင်းပါ။ ထိရောက်ပါတယ်။ ပြန်တမ်းဝင်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်မဖြစ်လဲ သူများဖြစ်တာမြင်ရင်ကို တိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
တစ်ခါ lone ဖေဖေ ကခြေထောက်နာနေလို့ မှတ်တိုင်ရောက်မှဆင်းမယ်လို့ပြောတာကို…ခင်ဗျားကယောက်ျားကြီးဖြစ်ပြီးလာနွဲ့နေတယ်လို့ပြောလို့ ဖေဖေက ပထမတစ်ခေါက်တော့ဘာမှမပြောဘူး…နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တွေ့တော့ အဖေ့ကို ရိသဲ့သဲ့နဲ့ ပြောလို့… အဖေ တိုင်လိုက်တာ…ကားသမားကော စပါယ်ယာကောပြုတ်သွားတယ်…ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်က ချောင်းရိုက်မယ်လုပ်နေလို့…lone တို့တောင်ကြောက်နေရတယ်….။
Lone တို့က ကိုယ်တိုင်သွားတိုင်တာကိုး။
ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်အမှန်ကိုပေးပါ။ အမှားပေးမိရင် ကွိုင်ကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုပြန်ဆက်သွယ်ဘို့ ဖုံးကိုတော့ ကိုယ်အမြဲကိုင်တာကို မပေးပါနဲ့။ သူငယ်ချင်း /အိမ်နီးချင်း ဖုံးကိုပဲ တဆင့်ခေါ်အဖြစ်ပေးပါ။
ကျန်တာကတော့ ဦးပါလေရာပြောတာ ပြည့်စုံပါတယ်။
ဒီလောက်ခြေရာဖျောက်ပြီးတိုင်တာတောင် ကိုယ့်ကိုခြေရာခံနိုင်သေးရင်တော့ အဲဒါ အပေါ်က အုပ်မှုးခွဲမှုးတွေကြောင့်ပါ။ အုပ်မှုးဆိုတာ စစ်တပ်အနွယ်တွေပါ။ ခွဲမှုးတွေက ဗိုလ်တွေပါ။ သူတို့လဲ ကြွက်စုတ်တွေပါ။ အကျင့်ကောင်းတဲ့ကောင်တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်လာရင် ကိုကြောင်ကြီးကိုအကူအညီတောင်းပါ။
(ကိုကြောင်ကြီး- နောက်တာနော် :D:D )
စပါယ်ယာမပါတဲ့ ဘက်စ်ကားတွေ ထားနိုင်ရင် အရမ်းကောင်းမှာ … ရန်ကုန်မှာတော့ ဘဏ်စနစ်နဲ့ ကဒ်စနစ်အရင်အောင်မြင်မှ ဘက်စ်ကားစပါယ်ယာမပါတဲ့ကိစ္စ လုပ်လို့ ရမယ် …. အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်
ကားခပေးရာမှာ အတိအကျပေးနိုင်မှ အဆင်ပြေပါတယ် … အရှေ့အပေါက်ကနေတက်ပြီး ပိုက်ဆံပုံးထဲကို တစ်ခါထဲ ထည့်ရမှာ … ပြန်အမ်းမယ့်သူ မရှိလို့ အတိအကျပေးနိုင်ရမယ် ….
ဆင်းတဲ့အပေါက်မှာ စပါယ်ယာမရှိပြန်တော့ စည်းကမ်းမရှိတဲ့ခရီးသည်တွေကြောင့် အဆင်ပြေအုန်းမှာ မဟုတ်ဘူး …
သတင်းထဲမှာ ယာဉ်မောင်းသူနဲ့ ယာဉ်နောက်လိုက်တွေကို သင်တန်းပေးမယ်လို့ ဖတ်လိုက်ရတယ် …
ယာဉ်နောက်လိုက်မပါရင်တော့ ယာဉ်စီးသူတွေကိုလဲ သင်တန်းပေးမှဖြစ်မှာ … နို့မို့ဆိုရင်တော့ ခရီးသည်အချင်းချင်း ရန်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲနေရလိမ့်မယ် ..
ဦးပါလေရာ ပြောတာ ထောက်ခံတယ်
အဆင်မပြေတာတွေကတော့ အများကြီးပဲ ၊ ကိုယ်တစ်ယောက်လုပ်ရုံနဲ့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ ၊ ကိုယ်လုိုလူတွေ များလာရင် တစ်ခုခုတော့ ထူးခြားလာမှာပါ ၊
တစ်ခါတုန်းက ကျွန်တော်စီးလာတဲ့ လိုင်းကား က ရှေ့ကားကို ကျော်တက်ဘို့ တဖက်ကြောကို သွားတယ် ၊ ဟိုဘက်ကြောလဲ ရောက်ရော တက်စ်စီနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် သွားတွေ့တယ် ၊ တက်စ်စီက သူ့အမှန်ဆိုတော့ ပေ ရပ်နေတယ် ၊ ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဒရိုင်ဘာ၊စပယ်ယာ နောက် အကူတစ်ယောက်က သူတို့လဲ မှားသေးတယ် သူတို့ကို မဖယ်ပေးရလားဆိုပြီး တုတ်တွေကိုင်ပြီး တက်စ်စီဆရာကို ပြသနာရှာတယ် ၊ တက်စ်စီဆရာက တိုင်/ မတိုင်တော့ မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ ဖြစ်စဉ်အတိအကျနဲ့ တိုင်လိုက်တယ် ၊ အားလုံးကို တစ်လစီ နားလိုက်တယ်
လူတိုင်း က ငါနဲ့ မဆိုင်သေးပါဘူး ၊ တော်ကြာ င့ါများ ပြသနာ ပြန်ရှာမလား ဆိုပြီး လွှတ်ပေးထားရင်း မသိချင်ယောင် ဆောင်ရင်းကနေ ၊ ကြာရင် ပိုဆိုးလာတော့မယ် ၊ မနေ့က ဂျာနယ် တစ်စောင်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် ဂေါက်ကွင်းတစ်ခုနားမှာ ကလေးငယ်လေး နဲ့ အဘွားလမ်းကူးတာကို ရှေ့ကားကိုကျော်တက်ရင်း လမ်းကြောင်းမှားသွားတဲ့ ဘတ်စ်ကားက ၀င်တိုက်တာ ပွဲချင်းပြီးပဲတဲ့
ဟယ်သနားပါတယ်….တွေ့မယ်တွေ့မယ်…ပါရမီတစ်ရုံးလုံးကို တိုင်ပစ်မယ်……တကယ့်တကယ်ကို စိတ်ပျက်စရာပါ….ရွာသားအားလုံးဝိုင်းတိုင်ပေးကြပါ….
လုံးဘဲဂျီးက တစက်မှ အားမကိုးရဘူးနော်။ ဦကြောင်သာဆိုရင် လုံးလေး ဘတ်စ်စကား မစီးစေရဘူး။ လမ်းလျောက်ခိုင်းမှာ။။
lone တစ်ယောက်တည်းမို့လို့ပါနော်… ဦးကြောင်ကလည်း…အဲ့လိုပြောပါနဲ့…. ငိုမှာနော်….
တိုင်တော့လဲ သိပ်တော့မလွမ်းလောက်ပါဘူးနော်။မထိတထိလုပ်မယ်ဆိုရင် ပါးသာချ၊လူကြီး၊သူကြီး၊အိုကြီး၊အိုမ
မှန်းမသိလောက်အောင်ကို မိုက်ရိုင်းနေကြပါရောလား။အော် လိုင်းကားစီးရတဲ့ဒုက္ခ……..ဒုက္ခ…..
That’s not only parami but also human,
“အမိယုတ်က နှုတ်သရမ်း၏ အဖယုတ်က လက်သရမ်း၏ ” တဲ့
အနည်းနဲ့ အများတော့ ကားပေါ်မှာက နှုတ်သရမ်းမှုရော၊
မိန်းကလေးတွေ အတွက် ထိထိရောက်ရောက် ဥပဒေရှိရင် ကောင်းမယ်နော်
အခုခေတ်က စပယ်ယာတွေတင် မကပါဘူး
ဟိရိသြတ္တပ တရားတောင် ပျောက်ဆုံးနေမှပဲ
တကယ်လို့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေရော ကားစီးရင်
သူတို့လို စပယ်ယာမျိုး ၊ သူတို့ လုပ်ခဲ့သလို အပြုအမူမျိုးတွေ
ကြုံနိုင်တယ်ဆိုတာ မတွေးမိကြဘူး ထိပါရဲ့………………
လုံးရေ ပြောရင်ပြောတဲ့ သူသာမောမယ် တိုင်ရင်တိုင်တဲ့ သူသာမောမယ်
သူတို့က ဘယ်လောက်တိုင်တိုင် သိပ်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အစားပဲ (အထူးဘတ်စ်ကား စပယ်ယာတိုင်းမဟုတ်ပါ )
ဟိုတစ်နေ့က အထူးကားစီးရင်း စပယ်ယာ နှစ်ယောက်ပြောနေတာလေးကို ပြန်ပြောပြမယ်
ပထမ စပယ်ယာ ။ မင်း တစ်လလောက် အနားပေးခံရတယ်ဆို
ဒုတိယ စပယ်ယာ ။ အေး ဟိုတစ်ခါကားပေါ်မှာ စော်ကြီးတစ်ပွေနဲ့ ညှိတာ သူတိုင်တယ်ထင်တယ်
ပထမ စပယ်ယာ ။ မင်းမိန်းမတော့ လစာမအပ်လို့ တစ်လလုံးမင်းနားညီးနေမှာပေါ့
ဒုတိယ စပယ်ယာ ။ ဟာကွာ အေးဆေးပါ ဒီတစ်လလုံး မိန်းမ အမျိုးတွေရှိတဲ့ ရွာမှာသွားနှပ်နေတာ
တော်တော် ဇိမ်ကျတာပဲ ။ မိန်းမနဲ့ ဟန်းနီးမွန်းခ၇ီးပေါ့ ။
ပထမ စပယ်ယာ ။ အော်ဒီလိုကျတော့လဲ မဆိုးဘူး ငါလည်းတစ်လလောက် ဒီလိုအနားယူရရင်ကောင်းမယ် တစ်လမဟုတ်တောင် တစ်ပတ်လောက်ပေါ့တဲ့ ။
သဂျီး အမှုရွာပတ် ဆိုသလို …
တိုင်လိုက်ကာမှ ကိုယ့်ပြန်ပတ်မှာလည်း စိုးရသေးတယ်.
စပယ်ယာအဆင့်တောင်.. ပြန်မလှန်ရဲတော့ ဘူးလားဗျာ…
အမတ်တွေက.. ရုံးခန်းဖွင့်ပြီး.. ဒါမျိုးတွေလက်ခံမှတ်သားရပါတယ်..။
သူကြီး…ဒီမှာက US မှ မဟုတ်တာ သူကြီးက US အကြောင်းပဲပြောနေတာပဲ…ဒီမှာလည်း အလည်တစ်ခေါက် ပြန်လာနေကြည့်ပါဦး….
ဆေးရုံတံခါးစောင့်၊ တံမြက်လှည်းသမားတောင် ကြောက်တာ အကျင့်ပါနေပြီမို့ …
ယူအက်စ်ဆိုတာမှာလည်း.. လူတွေနေတာပါပဲ.. လုံးမမရယ်..။
အမတ်ဆီ..တိုင်စာလေးတစောင် ယူပြီးသွားတိုင်ဖူးလားဟင်င်လို့.. မေးရမှာပါပဲ..။
US ဆိုလို့ ဟိုးအရင်ကပါ၊ အခုတော့ပြန်တွေ့နေရပါပြီ။
Contact us လို့ ကြော်ညာစာတွေ၊စာတမ်းဖိတ်ခေါ်ပွဲတွေရဲ့ အောက်ခြေမှာရေးလေ့ရှိတယ်လေ။
အဲဒါ US =အမေရိကန် ကိုဆက်သွယ်ပါလို့ သဘောသက်ရောက်လို့ ဆိုလား ဘာဆိုလား
ကြုံဘူးပေါင် ဂုဏ်ထူးဆောင် တို့ရယ်။
စပယ်ယာ နဲ့တော့ဖက် စကားမပြောပါနဲ့ကွယ် ချွေးဆော်တော်တော်နံတယ်..( နောက်တာ )
အဲဒီလိုင်းပေါ့ ဒရိုင်ဘာ ၃၀၀ ကျော်ရဲ့ လိုင်စင် စစ်တာ…တစ်ရာကျော်က လိုင်စင်အတုတွေတဲ့..။
ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ အရေးယူမယ် သိချင်ပ..။
ပါရမီ ၏စည်းကမ်း ကားနံရံပေါ်မှာသာရှိသည်… (စည်းကမ်းမရှိတဲ့သူတွေကို စည်းကမ်းမရှိတဲ့သူတွေဆီကို တိုင်မလို.လား) တိုင်တိုင်…
မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်းစုံထိန်းသိမ်းရေး (မ.ထ.သ) နဲ့မတူပါဘူး..သတ်သတ်ဆီပါ
(ဦးထီးရဲ့သီချင်းကိုပဲပြေးသတိရမိတယ်…ခေါင်မိုးကမလုံတော့မိုးဒါဏ်ကို…ကိုယ်ခံနေရတာအမှန်ပဲ…..ဒန့် ဒန် ဒန်)
သဂျီး တို့ ယူအက်စ်က အမျိုးသမီးတွေ ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ ၊ မျက်နှာကို ဖြန်းရတဲ့ စပရေးဘူးလေးတွေ ဆောင်ထားပါလား မလုံး ။
အဲဒါဆို..နောက် ကိုယ့်လက်လာဆွဲမယ် လုပ်တာနဲ့ ၊ မျက်ခွက် ကို စပရေးဘူးနဲ့ မှုတ်လိုက်တော့…
ကိုပေ အဲဒီနည်းဘယ်ကရလဲ မှန်မှန်ပြော မိုးစက်မမှတ်မိတော့လို့
အဲ့ဒါကြောင့် ကိုပေ ခေါင်းကြီး ငုံထားတာလေ………..
ဆူး တောင် အရက်ပြန်ထည့်ပြီး ကစ် ဆိုလား ပြောဖူးတယ်။ ဟားဟား..
ထူးဆန်း ပြောသလိုပဲ.. ခေါင်းငုံနေတာ မျက်စိစပ်သွားလို့ ဖြစ်ရမယ်။
မှိတ်မိဘီ မှိတ်မိဘီ …ဟီဟိ..
အဲဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့ …။ လုံးကို တစ်ယောက်ထဲ တစ်ယောက်ထဲ မသွားပါနဲ့…။ အဖော်ကောင်း တစ်ယောက်ရှာပါလို့………….
စပယ်ယာနဲ့ ခရီးသည်တွေ အရေးကလဲ ဘယ်တော့ကျမှ အေးမလဲမသိ
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ကိုယ်ပိုင်ကား တစ်ယောက်တစ်စီးစီ ရှိတဲ့နေမှလား
အန်တီလုံးတို့အသက်အရွယ်တွေတောင် အဲဒီလိုဆို အော်—– စပယ်ယာတွေတော့ အင်း——- ပြောတော့ပါဘူး
spare ဆိုတဲ့စကားကို ဘိုလိုတွေမှုတ်ပြီး ကပ်ထားတာ